काठमाडौं भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्,श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन् |
काठमाडौं भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्,श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन्
September 7, 2021 adminLeaveaComment on काठमाडौं भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्,श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन्
महानगरीय प्रहरीले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रूपमा खोलिएका केही क्याबिन रेस्टुराँ, मसाज र डान्स बारबाट यौ’नज’न्य गतिविधिमा सं’लग्न भएको आरोपमा ४० जना महिलालाई पक्राउ गरेको रहेछ।तीमध्ये ३५ जना विभिन्न उमेरसमूहका महिलालाई हनुमानढोका प्रहरीले पुनस्स्थापनाका लागि रक्षा नेपालमा पठाएको थियो। उनीहरूलाई बुझी संस्थाको सेल्टरमा ल्याउन म आफैं गएकी थिएँ। उनीहरूलाई ल्याएपछि एकरएकजनासँग गो’प्य कुराकानी भयो मेरो।
उनको भित्री कुरा सुन्दा म पनि छक्क परेँ। उनले मलाई यसो भनिन्, ‘तपाईं पत्याउनुहुन्न होला, म मारवाडी परिवारकी सदस्य हुँ। मेरो श्रीमान् ठूलो व्यापारी छन्। उनी व्यापारकै सिलसिलामा कहिले भारत, कहिले चीन र कहिले थाइल्यान्ड पुगिरहन्छन्। उनी प्रायस् घरबाहिर भइरहन्छन्।कहिलेकाहीँ घर आए पनि कि ल्यापटप, कि फोन, कि त मोबाइलमा बिजनेस डिल गर्नमै व्यस्त हुन्छन्। कतिसम्म भने मेरा श्रीमान्‌लाई आफ्ना छोराछोरी कति कक्षामा पढिरहेका छन्, त्यो पनि थाहा हुँदैन।
छोराछोरी र श्रीमतीले जति मागे पनि पैसा दिन्छन् तर त्यो पैसा केमा खर्च भयो, केही मतलब छैन। मेरो घरमा नपुग्दो केही छैन। नोकर, चाकर, हीरामोती, सुनचाँदी, गाडी, बैंक ब्यालेन्स सबै छ। तर, ती सबै कुराले मात्रै नहुँदो रहेछ। ती भएर पनि मेरो शा’री’रिक आवश्यकता पूरा भएन।यो कुरा मेरो श्रीमान्ले बुझिदिएनन्। पैसाका लागि होइन, शा’रीरि’क आवश्यकता पूरा गर्न म’साज पार्लर खोलेकी हुँ मैले। त्यहाँ आउने ग्राहक चित्तबुझ्दो छन् भने म आफैं यौ’ ‘नस’म्ब’न्धका लागि तयार हुन्छु। म यसैमा खुसी छु। यसमा अरूको टा’उको दु’ख्नुपर्ने किन?
५ बर्षकै यता काठमाडौंमा अनौठो घट्ना,भयो नसोचेको!
उपत्यकामा खोलिएको छ कोठी,ग्राहकलाई भित्र छिर्न पासकोड व्यवस्था
चार आना जग्गामा साढे दुई तला घर निर्माण गर्दा कति खर्च लाग्छ ? कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च हुन्छ ? जान्नुहोस् अहिलेको मार्केट रेट अनुसारको लागत अनुमान–
म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो!ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला!हेर्नुहोस पुरा बिवरण सहित
यो महिनामा जन्मिने ब्याक्ती अर्वपती हुने योग।यस्ता छन् लक्षण र आउने दिनका भविष्यवाणी,पुरा हेर्नुहोस्